Motors DC ngentengo eshibhile
Izinhlobo ze-DC Motors Nezicelo zazo
Izinhlobo zeDC DC
Imoto yeDC inezicelo eziningi emkhakheni wanamuhla wobunjiniyela nezobuchwepheshe. Ukusuka kumasheya kagesi kuya ezimotweni zezimoto - iMotor DC zikhona yonke indawo. Ukubambelela kulolu hlelo olubanzi lwezicelo - izinhlobo ezahlukahlukene zeMotor ze-DC zisetshenziswa ngokuya ngohlelo lokusebenza.
Uchungechunge olujabulise Imoto yeDC
Uma kwenzeka uchungechunge lwesilonda esizithokozisayo semoto ye-DC noma umane uchungechunge olilimaza i-DC motor, yonke ingalo yamanje yesikhali igeleza ingena ensimini njengoba ixhumeke ochungechungeni kuya ku-armature emazombezombe. Isigaba esisodwa uchungechunge lokuzijabulisa yimoto esetshenziswe kabanzi. Izinzuzo zayo zibangelwa isivinini sayo esikhulu, i-torque enkulu yokuqala, usayizi omncane, isisindo esincane, okulula ukuvimba, kanye nobubanzi obuningi bezintambo ezisebenzayo. Indlela yokulungisa ijubane, elula futhi elula ukuyisebenzisa. Ochungechungeni lwenxeba le-DC motor, isivinini siyahluka ngokulayisha.
I-Compound Excision DC Motor
Isici sokuthakazelisa esiyinhlanganisela yemoto ye-DC singatholakala ngokuhlanganisa isici sokusebenza kwemoto ye-DC eshisayo nochungechunge. Isikhuthazo senhlanganisela yesilonda se-DC motor singaba ngezinhlobo ezimbili ngokuya ngohlobo lokuhlanganiswa, Imoto ehlanganayo ye-DC motor kanye nomehluko wenhlanganisela ye-DC motor. Ama-motors e-DC ajabule kakhulu anokusebenza okuqinile futhi avame ukusetshenziswa kuwo imikhumbi, trolleybus, Futhi ukuphakamisa imishini yezimayini.
I-DC Ehlukile Ejabuliswe Ngezimoto
Le moto ejabule yodwa kungokwemoto eyiDC, okusho ukuthi i-coil exhunyayo kanye nokushayeka kwengalo yomshini wemoto yizihambeli ezihlukile, kanti okukhona manje kuhlinzekwa ngokwehlukile, kungakhathalekile ukuthi i-armature ekhona njengamanje. Ukukhonkotha okukhanyayo kanye nokushayelwa kwegesi okuhlukile kwemoto ejabule ngokwahlukana kunikezwa amandla yimithombo emibili yamandla. Umthombo wamandla ahlukile ocobekile wemoto ejabule ehlukile wenza imishini ibe nzima kakhulu. Noma kunjalo, le moto inezinto eziningi zokuhamba futhi isetshenziswa kakhulu kwi ukudonsa injini main.
I-Permanent Magnet DC Motor
Ama-Motors angapheli we-DC motors angahlukaniswa ngama-motor angamabhulashi angapheli we-DC kanye nogobolondo waphakade ochobozekile abane-DC noma ngebhulashi ngaphandle. Ama-motors anaphakade we-DC motors asetshenziswa kabanzi ezinhlobonhlobo amadivaysi kagesi atholakalayo noma izinto zikagesi, njengama-rekhoda, abadlali be-VCD, abadlali berekhodi, abakwa-massager kagesi, namathoyizi ahlukahlukene, futhi futhi kusetshenziswa kabanzi ezimotweni zezimoto, izithuthuthu, okomshini bezandla, amabhayisekili kagesi, kanye namabhethri Izimoto, ezasolwandle, izindiza, imishini kanye nezinye izimboni esetshenzisiwe kwezinye osezingeni eliphezulu imikhiqizo, njengamarekhoda wevidiyo, abakopishi, amakhamera, izingcingo zamaselula, amathuluzi womshini wokunemba, amakhawunta wokubala imali wasebhange, kanye nemishini yokubhanqanisa imibhalo.
Buka Yonke Iphrojekthi
Iqembu elihle kakhulu lokuqamba ubuchwepheshe alikwazi ukuletha impilo ebhizinisini kuphela, kepha futhi liqhube ukuthuthukiswa okusheshayo kwemboni nomkhakha. Le nkampani inethimba lebhizinisi elibunjwe ngabasebenzi abafundile nabafundile kakhulu, liqongelele isipiliyoni sokusebenza ngokucebile, futhi lasungula uhlelo lokulawulwa kwesayensi. Amalungu eqembu mncane futhi agcwele ubungqabavu, anobuhlakani futhi anesibindi sokubhekana nezinselelo. Ngomqondo omuhle wokuzibophezela kwezenhlalo, ngithanda ukufaka isandla ekwenzeni ngcono isimo se-China Electric.
Siyinkampani ekhiqiza imikhiqizo ye-Nokia ewuchungechunge. Le nkampani yasungulwa ngonyaka ka-1995, ngemuva kweminyaka yentuthuko, inkampani isithole ukwethenjwa kwamakhasimende amaningi amakhulu ahlala njalo ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu nezinsizakalo ezinhle kakhulu. Ukwaneliseka kwamakhasimende ethu ngemikhiqizo yethu kungumthombo wethu omkhulu wamandla, futhi umthombo wamakhasimende ohleliwe futhi ukhombisa ukuthembeka kwemikhiqizo yethu. Iminyaka eminingi yolwazi lokukhiqiza ukukunikeza ngemikhiqizo emihle.